Ny fipoahana faharoa dia notaterina tao amin'ny seranam-piaramanidina Kabul taorian'ny nahafatesan'ny olona 13 tamin'ny baomba voalohany
Home » Lahatsoratra farany farany » Crime » Ny fipoahana faharoa dia notaterina tao amin'ny seranam-piaramanidina Kabul taorian'ny nahafatesan'ny olona 13 tamin'ny baomba voalohany
Nipoitra ny tatitra momba ny fitsikilovana tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity ny fampitandremana momba ny fanafihana mpampihorohoro “efa ho avy” natao tao amin'ny seranam-piaramanidina Kabul nataon'ny ISIS-K - mpikambana ao amin'ny Fanjakana Islamika ao Afghanistan.
Manapoaka ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Kabul Hamid Karzai ny fipoahana.
Ny fipoahana dia toa fanafihana baomba namono tena.
Raha ny filazan'i Taliban dia olona 13 no maty tamin'ny fipoahana voalohany.
Fanapoahana baomba roa teo akaikin'ny seranam-piaramanidin'i Kabul androany no niteraka “maratra amerikana & sivily marobe”, hoy ny Pentagon.
Fipoahana iray androany maraina teo akaikin'ny vavahady Abbey an'i Kabul Hamid Karzai International Airport, dia nohamafisin'ny Departemantan'ny fiarovana amerikana Ny sekretera an-gazety John Kirby, izay nilaza fa ny fipoahana dia nanjary “olona maty tsy fantatra”.
Raha ny filazan'ny mpitondra tenin'ny Taliban, ny fanafihana baomba namono tena dia 13 no maty farafahakeliny, anisan'izany ny ankizy sy ny mpiambina Taliban.
Nisy fipoahana faharoa tao amin'ny faritry ny Hotel Baron akaikin'ny seranam-piaramanidina Kabul taorian'ny fipoahana lehibe satria mbola mitohy ny famindran-toerana ny miaramila.
Fotoana fohy talohan'ny fipoahana faharoa dia nampitandrina ireo sivily ny masoivoho frantsay any Afghanistan mba “hanaloka” lavitra ny vavahady mankany amin'ny seranam-piaramanidina Kabul, ary nilaza fa mety hisy fanapoahana baomba faharoa aorian'ny tatitra voamarina momba ny fipoahana lehibe iray raha mbola nitohy ny famindra-miaramila.
Ny masoivoho David Martinon dia nibitsika fampitandremana “maika” ho an'ireo “namantsika Afghan rehetra” tamin'ny Alakamisy, ary nampitandrina fa “misy fipoahana faharoa.” Nilaza ny tompon'andraikitra amerikana fa ny fipoahana voalohany dia ny asan'ny baomba namono tena tany ivelan'ny seranam-piaramanidina.
Ny toe-javatra tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Hamid Karzai dia efa nisafotofoto talohan'ny fipoahana, satria Afghana, Amerikanina ary olon-kafa an'arivony maro no mitady fialofana azo antoka mivoaka ny firenena alohan'ny fe-potoana 31 aogositra.